न्यायाधीशले भने: बहस लामो भयो, टुंगिदासम्म त चुनाव भैसक्ला ! | जनदिशा
न्यायाधीशले भने: बहस लामो भयो, टुंगिदासम्म त चुनाव भैसक्ला !
काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धमा भइरहेका बहस लामा भइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दाको नियमित सुरु हुन लागेको दोस्रो दिन बिहान साढे ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले मात्रै बहस गरेका छन् । कानुन व्यवसायीहरूले बहस लामो गरेपछि इजलासले समयको ध्यान दिन सुझाएका छन् ।
जवाफमा पोखरेलले अगाडि नै पनि आफूले थप ३० मिनेट बहस समय लिने स्मरण गराए । सिन्हाले आफूहरूले नरोक्ने तर समय व्यवस्थापन गर्न भनेको मात्रै र अवस्था सुझाएको मात्रै बताए ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले बहस अन्त्य गर्न सुझाइन् । जवाफमा पोखरेलले भने ‘मैले सुरू गरेपछि इन्डिङ पनि गर्नुपर्छ । अलिकति १०/१५ मिनेट भएपछि मैले समराइज गर्छु । तर लामो गर्दिनँ ।’बिहान ३ घण्टाभन्दा लामो समय बहस गरिरहँदा पनि अझै समय लिने भनेपछि सिन्हाले भने, ‘हामी रोक्दैनौं ।’ न्यायाधीशहरूले लामो समय नलिन आग्रह गरेपछि पोखरेलले बहस टुंग्याए।
आइतबार निवेदकका तर्फबाट सन्तोष भण्डारी, गिरिराज भट्ट, भीमार्जुन आचार्य र सुनिलकुमार पोखरेलले मात्रै सहभागिता जनाएका थिए ।कान्तिपुर
Previous Previous post: प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध जाग्यो रसुवा
Next Next post: ओलीलाई थप कारवाही